UN red-flags Zimbabwe on human rights - Bulawayo24 News
PRESIDENT Emmerson Mnangagwa's administration was found wanting by United Nations (UN) member States on human rights violations, with enactment of draconian legislation to curtail freedoms coming under sharp focus.
The United States permanent mission chargé d'affaires to the United Nations, Benjamin Moeling, said Zimbabwe should "establish an independent complaints mechanism to investigate and hold accountable members of the security forces who allegedly engaged in
in (human rights) violations and abuses".
"(Zimbabwe must) enforce security and due process laws adopted under the 2013 Constitution that prohibit arbitrary arrests and prolonged detentions (and) allow the practice of constitutionally-guaranteed freedoms of expression, peaceful assembly, and association for all," Moeling said in presenting US recommendations.
"That Zimbabwe should ensure courts are impartial, amend the Freedom of Information Act and the peace order Act and remove undue restrictions on freedoms," Belgium said in its recommendations.
But Justice minister Ziyambi Ziyambi, who represented Zimbabwe alongside permanent secretary Virginia Mabhiza, defended the country's human rights record.
"The special rapporteur on freedom of peaceful assembly and of association stated that irrespective of the imposed unilateral restrictive measures, Zimbabwe had a duty to fulfil its human rights obligations," the UN country team said.
"In addition, the special rapporteur received reports of arbitrary arrests and heard allegations of politically-motivated sexual violence.
"He recommended that Zimbabwe ensures that all allegations of excessive use of force were promptly, thoroughly and independently investigated, alleged perpetrators are prosecuted and adequate remedy was provided to the victims."
More on: #Zimbabwe, #Red_flag
7 hrs ago | 4019 Views